Sefo fokontany eto an-drenivohitra :: Hanendry olona iray amin’ireo telo lanin’ny fokonolona ny Prefektiora • AoRaha
Sefo fokontany eto an-drenivohitra Hanendry olona iray amin’ireo telo lanin’ny fokonolona ny Prefektiora
Feno ny fepetra. Hirosoana tsy ho ela ny fifidianana an’ireo sefo fokontany roa amby sivifolo amby zato eto Antananarivo renivohitra (Cua), araka ny fanambaran’ny prefektioran’ Antananarivo, Ravelonarivo Angelo, tetsy amin’ny biraony tetsy Tsimbazaza, omaly. Nohazavainy fa olona iray amin’ireo telo haroson’ny fokonolona no hotendrena hiadidy ny fokontany.
“Mandritra ny fivoriambe antsoin’ny lehiben’ny distrika na ny prefektiora no hanatanterahan’ ny fokonolona ny fifidianana sefo fokontany. Homena ny lehiben’ny distrika ireo anarana telo voafidy, avy eo, ka amin’ireo no hanendreny olona iray hitantana ny fokontany. Ho an’ny eto Antananarivo renivohitra manokana dia ny prefektiora no hanendry an’io tompon’andraikitra eny ifotony io”, hoy izy.
Nolazain’ny minisitry ny Atitany sy ny fitsinjaram-pahefana, Razafimahefa Tianarivelo, tamin’ny antso an-tariby, omaly, fa “efa eo am-pikarakarana ny fifidianana an’ireo lehiben’ny fokontany ireo ny fanjakana, amin’izao fotoana izao. Efa tafapetraka amin’ny fomba ara-dalàna, tamin’ny volana janoary lasa teo, avokoa ireo ben’ny tanàna eto amin’ny faritanin’ Antananarivo, hoy izy, ka tsy misy intsony ny sakana tsy hirosoana amin’io fifidianana eny ifotony io”.
Tsiahivina fa telo volana, fara fahatarany, aorian’ny nametrahana amin’ny fomba ara-dalàna an’ireo mpitantana ny kaominina no tokony hofidiana ny sefo fokontany.
Ady amin’ny coronavirus Vonona ireo fitaovana an’aliny fitiliana tsimok’aretina
Filana ravinahitra Ieren-doza amin’ny tsimok’aretina aloha ireo mpilalao malagasy
Fisorohana ny fidiran’ny « Coronavirus » :: Sambo roa mpitondra olona voarara tsy hiantsona teto amintsika
Fanadinam-panjakana :: Hatao amin’ny volana aogositra ny Bakalorea 2020